Maxalliga ah: Samee Macluumaad Desktop ah si aad u Hormarin iyo Isku Xidho Boggaaga WordPress | Martech Zone
Haddii aad wax badan ka qabatay horumarinta WordPress, waxaad ogtahay inay badanaa ka dabacsan tahay oo dhakhso badan tahay inaad ka shaqeyso desktop-kaaga ama laptop-kaaga halkii aad marwalba ka walwali lahayd isku xirnaanshaha fog. Ku shaqeynta server keydka macluumaadka deegaanka waxay noqon kartaa wax xanuun badan, in kastoo ay u egtahay dejinta MAMP or XAMPP si aad u bilowdid adeegaha webka ee maxalliga ah, u dejiso luqaddaada barnaamijka, ka dibna ugu xirto xogtaada.
WordPress waa wax iska fudud marka loo eego aragtida dhismaha… ee ku socota PHP iyo MySQL ee NGINX ama Apache Server. Marka, ku tuurista dhamaan qaab dhismeedka shebekadda kombiyuutarkaaga kombiyuutarkaaga ayaa laga yaabaa inay noqon karto tan kor ah… oo aan ku xusin dhab ahaantii barashada sida loo furo serverka webka, loo furo serverka keydka macluumaadka, oo labadaba isku xir!
Maxalli: Hal Guji Ku rakibidda WordPress
Local wuxuu sameeynayaa abuuritaanka degel WordPress ah oo wadarta guud ah neecaw, marka uma baahnid inaad ku mashquusho dejinta naftaada. Hal guji oo bartaada ayaa diyaar u ah inay tagto - SSL ayaa lagu daray! Liistada qaababka waa quruxsan cajiib!
Adeegyada Goobta - Dhalad, PH-ka heerka PHP, MYSQL, adeegyada server-ka. Ku kaydi faylasha noocyada shakhsiyadeed ee PHP, NGINX, Apache, iyo MySQL dhammaantood waxay u muuqdaan inay wax ka beddelayaan.
Maamulka Goobta - Is-weydaarsiga kulul ee u dhexeeya NGINX ama Apache, noocyada PHP (5.6, 7.3 iyo 7.4 oo leh Opcache), iyo URL URL. Ku gal faylasha noocyada shakhsiyadeed ee PHP, NGINX, Apache, iyo MySQL dhammaantood si habboon ayaa loo soo bandhigaa.
Goobaha Clone - Dhammaan feylasha, keydka macluumaadka, qaabeynta, oo ay ku jiraan URL-ka Goobta ayaa si badbaado leh loo beddeli karaa loona dardar gelin karaa
Debug - si dhakhso leh u khafiifi PHP (Xdebug ayaa laga heli karaa Maktabada Fududeeyaha)
Tunnelka HTTPS - Shahaadooyinka is-saxeexa ah ayaa si otomaatig ah loogu abuuray bogag cusub. Jidka hoose ee aasaasiga ah ee ay bixiyaan Ngrok, URL-yada joogtada ah ee leh xadadka isku-xirnaanta sare, tijaabada websaydhada tijaabada ah, PayPal IPN, iyo Nasashada API-yada
Multisite WordPress - ku taageer subdomain iyo subdirectory rakibayaal adigoo hal-gujinaya si aad uhesho subdomain faylasha martida loo yahay.
Daabacadaha Goobta - keydso goob kasta sidii naqshad aad dib ugu isticmaasho hadhow. Dhammaan feylasha, keydadka macluumaadka, feylasha qaabeynta, iyo dejimaha maxalliga ah waa la soo celin doonaa.
Soo dejinta / Dhoofinta - waxaa ka mid ah feylasha goobta, keydka macluumaadka, faylasha isku xirnaanta, faylasha lagu qoro, iyo dejimaha Maxalliga ah. Ka reeb faylasha dhoofintaada sida keydka, PSDs, .git, iwm.
Mail - MailHog ayaa lagu soo daray si loo joojiyo wixii emayl ah ee ka baxaya PHP mail-ka ee daawashada iyo xallinta (tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaad tijaabin karto emaylka intaad khadka ka jirin)
SSH + WP-CLI - Helitaanka xididka fudud ee SSH ee goobaha shaqsiyeed. WP-CLI ayaa la bixiyay, si fudud u qor "wp" ka dib furitaanka goobta SSH.
Taageerada - waxaa ka mid ah Kulamada Bulshada, taageerada barnaamijka, iyo tikidhada.
Isku dubarid oo ka hawlgal gudaha illaa Flywheel ama WPEngine
Xitaa ka sii wanaagsan, tusaalahaaga maxalliga ah ayaa la geyn karaa oo la waafajin karaa xoogaa cajiib ah WordPress maareeyay martigelinta adeegyada:
Geli WordPress - ilaa Flywheel wax soosaarka, Flywheel istaagid, ama si WP Motor
Saaxiibtinimo - kaliya feylasha la beddelay ayaa la soo bandhigi doonaa marka ay u dhexeeyaan deegaannada.
Deegaanka ayaa dhab ahaantii la sii daayay Flywheel!
Kala Soco Degaanka
Shaacinta: Waxaan xiriir la leenahay Flywheel (boggeena waxaa lagu marti qaaday halkan!) iyo WP Motor.
Tags: apacheconfigwordpress khaladgeeyo wordpressflywheelhorumarka deegaankadiiwaan faylashasixirphpsocod wordpress maxaliga ahsoo diriskudhaf wordpresswordpress isku mid ahWordPressnaqshadeynta wordpressmarti gelinta wordpresswp-cliwpengine